Nalka dhismaha jumlada Alaabooyinka | Huayi Iftiin
Guriga > Alaabta > Iftiinka Dhismaha
Iftiinka dhismaha -Saddexda nooc ee ugu caansan ee naqshadeynta nalalka naqshadeynta waa cove, soffit iyo valance. Saddexduba waxay ku dhex milmeen qolka'qaab dhismeedka. Qalabka nalka ee dhismaha waxaa ka mid ah nalka foorarsan, nalka barta, iftiinka hoos u dhaca, darbiga dhaqida iyo wixii la mid ah.Iftiinka dhismaha waxaa si weyn loogu isticmaali karaa nalalka dhismaha gudaha iyo iftiinka dhismaha dibadda.
Huayi Lighting waa soosaarayaasha nalalka naqshadeynta LED-ka ee xirfadleyda ah, waa nalalka iftiinka naqshadaha LED dhamaadka sare. Shirkadda ayaa go'aansatay inay soo saarto R&D naqshadeynta iyo maalgashiga hal-abuurka sayniska iyo tignoolajiyada. R&Kooxda D ayaa gaadhay boqollaal qof. Waxay samaysay cilmi-baaris iyo nidaam horumarineed oo diiradda saaraya madaxbannaanida R&D iyo isku-darka wax-soo-saarka, waxbarashada iyo cilmi-baarista kaabista. Sii macaamiisha noocyada kala duwan ee naqshadaynta nalalka naqshadaha.
Jaranjarada II Taxanaha
Iftiinka Talabada aan biyuhu celin karin
Tri-proof LightLambaska: Sanan
Taxanaha BRILLANT C
Taxanaha dusha sare
Tayada sare leh ee RGB Neon strip light
Serises nalalka manetic
Nalka gidaarka dib loo dhigay, Ku habboon nalalka raad-raaca kasta, nalalka birlabeedka. Si weyn loogu isticmaalo xafiiska.